Fitandremana amin'ny fisafidianana material ny efitrano fandroana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-27
Amin'izao fotoana izao, rehefa manaingo isika, dia mametraka fotony fandroana ao anaty trano fidiovana. Ankehitriny dia mihamaro ny olona mahalala fa tokony hanao ny famolavolana fisarahana maina lena isika. Na izany aza, ankoatry ny maha-zava-dehibe ny fisarahana maina lena, maro ny olana mila jerena ao amin'ny co ...
Fampandroana acrylic teknolojia famokarana
Bathtub dia vokatra ara-pahasalamana matetika ampiasaina amin'ny haingon-trano fiankohonana maoderina, ary ny fitaovana ampiasaina koa manankarena be. Amin'ny ankapobeny, ampitahaina amin'ny akora vita amin'ny seramika sy akrilika, ny koveta fandroana akrilika dia mamonjy angovo bebe kokoa ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Noho izany, tena ...
Midira ao amin'ny atrikasa famokarana fandroana ary manala sarona ny fizotran'ny famokarana fandroana
Ny kalitaon'ny vokatra no fototry ny orinasa iray. Raha tsy misy kalitao dia resaka poakaty momba ny fampandrosoana sy ny fifaninanana izy io. Ho an'ny orinasa, ny kalitao no vato fehizavan'ny fahavelomana sy ny fampandrosoana. Ao amin'ny harinkarenan'ny tsena mihombo ankehitriny, ny kalitaon'ny vokatra dia lasa ...